अन्तराष्ट्रिय Archives - Page 312 of 323 - Sawal Nepal
मोदीलाइ ज्यान मार्ने योजना यसरी बनिरहेको खुलासा
काठमाडौं। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ज्यान खतरामा रहेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । भारतीय गुप्तचर निकायले गरेको अध्ययनले सोमबार मोदी जान लागेको मउको र्‍यालीमा मोदीको ज्यान असुरक्षा रहेको भन्दै सो र्‍यालीको लागि उच्च संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको बताईएको छ । उत्तरप्रदेशको चुनावी माहोल तताउनको लागि मोदी सोमबार त्यसतर्फ जाँदैछन् । तर, सोही स्थानमा आतंकबादी संगठनले
काठमाडौं, ९ फागुन । राजदूत नियुक्तिमा विवाद नेपालमा मात्र हुँदैन, भारतमा पनि हुन्छ । नेपालका लागि भारतीय राजदूत छनौटमा तीब्र गुटवन्दी र विवाद भइरहेको छ । नयाँदिल्लीस्थित श्रोतका अनुसार सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका नेताहरुको गुटवन्द्यी र तानातानले नेपालमा राजदूत नियुक्त हुन नसकेको हो । वर्तमान राजदूत रन्जीत रेको कार्यकाल फेब्रुअरी २५ बाट सकिँदैछ । उनलाई
चर्चित हिरोइन शुक्रबार राति बलात्कृत, यसरी भयो घटना
काठमाडौँ, ८ फागुन । एकजना चर्चित अभिनेत्रीलाई आफ्नै ड्राइभरले बलात्कार गरेको समाचार बाहिर आएको छ । शुक्रवार राति आडी भन्ने स्थानमा साउथ इन्डियन फिल्म इन्डस्ट्रीकी ती अभिनेत्रीको बलात्कृत भएको समाचारमा उल्लेख छ । अभिनेत्री मलायालम फिल्म इंडस्ट्रीमा चर्चित छिन् । उनले तेलगु, तमिल र कन्नड फिल्ममा पनि काम गरिसकेकी छिन् । अभिनेत्रीका ड्राइवर मार्टिन र सुनिल
अमेरिकी प्रेस नियन्त्रण बाहिर गएको राष्ट्रपति ट्रम्पको आरोप
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो छवि खराब बनाउन सञ्चारक्षेत्र लागि परेको आरोप लगाउनुभएको छ । ह्वाइट हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा करीब ७६ मिनेटसम्म ट्रम्पले आफ्नो शुरुवाती कामकाजको बचाउ गर्दै अमेरिकी प्रेस नियन्त्रण बाहिर गएको भन्दै रोष प्रकट गर्नुभएको थियो । आफू राष्ट्रपति बने लगत्तै विश्वसमुदायमा जति आफ्नो आलोचना भयो त्यति नै प्रेसले पनि आफ्नो अपमान
हेर्नुहोस भारतको सक्कली अनुहार भारतमा आणविक शहर भएको सनसनिपूर्ण खुलासा
अमेरिकाको प्रख्यात जर्नल ‘फरेन पोलिसी’ले सन् २०१५ डिसेम्बर १६ तारेखका दिन एउटा सनसनीपूर्ण खुलासा गर्यो– भारतले कर्नाटक राज्यको चल्लकेरे नामक निर्जन स्थानमा नयाँ आणविक सहरको निर्माण गरिरहेको छ । चल्लकेरेअर्ध मरुभूमि जस्तो र उपयोग विहीन जमिन भएको स्थान थियो । त्यसको आसपास लम्बानी समुदायका आदिवासीहरु बसोवास गर्छन् । त्यस वरिपरीका चौर र घाँसेमैदानमा उनीहरु निर्वाध
भारतको ‘गोप्य आणविक सहर’ ले दक्षिण एसिया नै खतरामा’
इस्लामाबाद (पाकिस्तान), २८ माघ । पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले बिहीबार सञ्चारमाध्यमसँगको नियमित कुराकानीमा भारतले ‘गोप्य आणविक सहर’ निर्माण गर्न लागेको दाबी गरेको छ । पाकिस्तानले त्यो आणविक सहरमा भारतले गोप्यरुपमा आणविक हतियार भण्डारण गर्न लागेको पनि दाबी गरेको छ । यसरी बन्ने गोप्य आणविक सहरले एसिया क्षेत्रको सुरक्षा स्थितिमा समस्या उत्पन्न हुने पाकिस्तानको विदेश मामिला अध्ययन
अमेरिकामा ट्रम्प विरुद्ध प्रदर्शन बढ्दै, दूतावासमा नेपालीहरु आत्तिएर फोन गर्छन्
१९ माघ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पछिल्ला निर्णयका विरुद्धमा जुलुस विरोध र धर्ना दैनिक बढेका छन् । मुख्य सडक, उपराष्ट्रपतिको निवासदेखि अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलहरुमा समेत विरोध भएका छन् । राती अबेरसम्म मैनबत्ती बालेर जुलुस निकालेका छन् । राष्ट्रपति निर्वाचनको वहसमा नै पटक पटक आप्रवासी मुस्लीमलाई अमेरिकाबाट लखेट्ने बताउँदै आएका ट्रम्पले पाँच दिन अघि त्यस्तै निर्णय
कुखुरालाई जेल सजायँ
घरमा पालेको कुखुरालाई खोरमा थुन्नु त स्वभाविकै हो । तर के तपाइँले कुनै कुखुरालाई कानून बमोजिम सजायँ दिएर जेलमा हालिएको खबर सुन्नुभएको छ ? मध्य अमेरिकी देश होण्डुरसमा एउटा यस्तै रोचक घटना सार्वजनिक भएको छ । जसमा कुखुरालाई जेल हालिएको छ । आखिर कुखुरालाई जेल सजायँ किन भयो त ? कारण थाहा पाउनुभयो भने तपाइँ
रियो दि जेनेरो (ब्राजिल), १८ माघ । कुनै समय विश्वका सर्वाधिक धनाड्य ब्राजियाली व्यवसायी एइक बाटिस्टाले सोमबार प्रहरी समक्ष आत्मसपर्मण गर्नुभएको छ । विभिन्न घुस तथा भ्रष्टाचार आरोप लागेका बाटिस्टा सोमबार रियो दि जेनेरियास्थित विमानस्थलमा ओर्लनुभएपछि उहाँलाई ब्राजिलियाली प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा लिएको हो । प्रहरीले पक्राउ परेका बाटिस्टाको स्वास्थ्य अवस्था ठिक भए नभएको सम्बन्धमा
पत्रिकाबाट मोदीलाई ट्रम्पको फोन आउँदा दीपावली, अब सुरु भयो रुवाबासी
नयाँ दिल्ली, १८ माघ । डोनल्ड ट्रम्प सरकारको आदेशका कारण अमेरिकामा एच-१ बी भिसमा आउने प्रवासीको जीवनमा मुस्किल बढ्ने देखिएको छ। खासगरी भारतीय आइटी कम्पनीहरुले आफ्ना कमर्चारीलाई अमेरिका पठाउनका लागि एच-१ बी भिसाको धेरै प्रयोग गर्दै आएका छन् । ह्वाइट हाउसले यस भिसा प्रावधानमार्फत अमेरिका आउनेलाई कडाई गर्नका लागि निर्देशन दिनेबारेको तथ्यहरु बाहिरिएसँगै भारतीय आइटी